"Jesosy … niantso izay tiany, hankeo aminy ; dia nankeo aminy ireo."Marka 3:13
"(Hoy Jesosy:) Tahaka ny nitiavan’ny Ray Ahy no nitiavako anareo ; tomoera amin’ny fitiavako ianareo."Jaona 15:9
Tao amin’ity toeram-pisotroana tany Italia, dia nisy mpikambana iray ao amin’ny Mafia (vondron’olona mpanao asa ratsy, arahina famonoana olona), lehilahy mahery fihetsika sy maty eritreritra, niara-nipetrapetraka tamin’ireo namany, mpikambana ao ihany koa. Indro niditra ity zazavavy kely, nizotra tsy nisy tahotra nanatona azy, nikasika azy tamin’ny fanondrony, ary niteny taminy hoe: «Tia anao Jesosy». Sorena ilay lehilahy, ary tsy nanambitamby namaly azy hoe: «Avelao aho». Niverina indray ilay zazavavy nony kelikely, nikasika azy indray sy namerina niteny hoe: «Fantatrao moa, tia anao Jesosy». Efa niteny taminao aho hoe: «Avelao aho, mandehana mivoaka any». Mbola niverina fanintelony ihany ilay zazavavy, ary mbola nanao taminy hoe: «Tia anao Jesosy». Tezitra mafy ralehilahy, ka sady nandray azy tamin’ny vozony, no nanosika azy hatreny am-baravarana, ary namoaka azy.
Tsy noeritreretin’ilay zazavavy ny loza mety hanjo azy, manelingelina olona tahaka io, ka mbola niverina indray izy, fotoana fohy taorianan’izany, ary narahiny tsiky feno fandresen-dahatra ilay teniny hoe: «Tia anao Jesosy».
Mitantara io lehilahy io, fa nandritra ny roa taona dia nanakoako tao an-tsainy hatrany ireo teny ireo, ary tsy hainy nesorina. Ireo no fitaovana nampiova fo azy. Ankehitriny izy dia evanjelista, manao ny asan’Ilay fantany tamina fomba mampihetsi-po toy izany. Mampahafantatra ny Tenin’Andriamanitra eran’izao tontolo izao izy, ary manambara amin-kery ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fahasoavany, izay namonjy azy rahateo.
“Mahatoky Izay miantso anareo” (1 Tesaloniana 5:24). “Anio, raha hihaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo” (Hebreo 3:15).